विरोधका बावजुद भरतपुर महानगरमा एमालेको सपथग्रहण - Khabar Muluk
निर्वाचन कमिटीका संयोजक देवी ज्ञवालीले मञ्चबाट सवैको सहमतिमा कमिटी निर्माण गरेको बताइरहदा कार्यक्रमस्थलमा उनकै विरुद्धमा लेखिएको व्यानरले भने उनलाईनै गिज्याइरहेको थियो ।
केपी शर्मा– कात्तिक २५, २०७८
विरोधका बाबजुद उद्घाटन भएको १०औँ दिनका दिन नेकपा एमाले भरतपुर महानगर कमिटीको शपथ ग्रहण गराइएको छ ।
केन्द्रीय सचिव प्रदिप ज्ञवालीको उपस्थितीमा नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष सहित पदाधिकारी,सदस्य सवैलाइ शपथ खुवाइएको हो ।
सहमति गराउने केन्द्रको निर्णय अनुसार भन्दै पार्टीभित्र चुनावनै नगराईकन कमिटी गठन गरिएको थियो । सहमतिका नाममा जेएन थपलिया लाइनका शंकर थपलियालाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत गरिएको हो । अर्का उम्मेदवार प्रल्लाहाद प्रधानले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको बताइरहँदा निर्वाचन समितिले भने थपलियालाई अध्यक्ष घोषणा गरेको हो ।
उपाध्यक्ष पद पछि मिलाउने भन्दै निर्वाचन समितिले खालिनै राखेको छ ।सचिवमा बादल समूहका टिका सुवेदी र उपसचिवमा विजय सुवेदी लाइनका निशा अधिकारीलाई निर्वाचन कमिटीले चयन गरेको छ ।
११७ महानगर कमिटीमा उपाध्यक्ष र एक उपसचिव वाहेक सवैमा सर्वसम्मत गरिएको निर्वाचन कमिटी संयोजक देवी ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
पार्टी कार्यालयभित्र शपथग्रहण कार्यक्रमको सुरसार भइरहदा कार्यलयको प्रवेशद्धारमा नयाँ कमिटी गठनप्रति विरोध जनाउँदै रातो व्यानर टाँसिएको थियो । जसमा लेखिएको थियो,क.देवी ज्ञवालीः नेकपा एमालेको बहुदलिय जनवाद छोडिसकेको होर? मेरो उम्मेदवारी फिर्ता नभई वा मतदान नभई कसरी कमिटी घोषण भयो ? कि भागबण्डा हो ?
सपथग्रहण चलिरहदा प्रधान समूहका केही कार्यकर्ताहरुले उक्त विरोधको व्यानर लिएर कार्यक्रमस्थलमै उभिएका थिए । कार्यक्रम सचालक रामप्रसाद न्यौपानेले उनीहरुलाई केही पर बस्न भन्दै गर्दा उनीहरुले नमानेको दृश्य देख्न सकिन्थ्यो ।
विरोध चलिरहदा निर्वाचन कमिटीका संयोजक देवी ज्ञवालीले आफूले पार्टीको निर्देशन मान्दै सहमतिमै कमिटी चयन गरेको रोष्टमबाट बताइरहेका थिए । उनले भनेका हरेक कुरालाई विरोधको व्यानरले खिल्ली उडाइरहेको थियो ।
तर पछि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रदिप ज्ञवालीले विरोध गर्ने पक्षको माग सम्वोधन गर्न र उनीहरुलाई सुहाउँदो स्थानमा जिम्मेवारी दिन जिल्ला नेतृत्वलाई निर्देशन दिएर विरोध स्थगित गर्न भनेपछि वल्ल उनीहरुले व्यानर वन्द गरेर कार्यक्रममा सहभागी जनाएका थिए ।
शपग्रहण कार्यक्रममा १० भाइ समूहले पनि विरोध जनाएको थियो । तर कार्यक्रमको अन्तमा दशभाई समूहका तेजेन्द्र खड्का देखिए ।
सर्वसम्मतको नाममा नयाँ कमिटी बनाउँदा केही समूह भने रित्तै भएका छन् । अन्तिम समयसम्म माधव नेपाललाइ समर्थन गर्दै पछि एमालेमै आएका १०भाई समूहबाट सचिवमा उम्मेदवारी दिएका रोहीत सुवेदी छनौटमा परेनन् । जसका कारण १०भाई रित्तै हुन पुगेको छ ।
त्यस्तै ओली गुटका देवी ज्ञवालीको जोडवलमा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका अनोज जोशी पनि रित्तै हात वस्नु परेको छ भने कृष्णभक्त पोखरेलको जोडवलमा उपाध्यक्षमै उम्मेदवारी दिएका कृष्ण केसीपनि छानिएका छैनन् । अव खाली रहेको उपाध्यक्षमा कुन समूहको दाउ पर्नेहो हेर्न वाँकी छ ।
प्रकाशित मिति : कात्तिक २५, २०७८, बिहीवार १३:१० बजे